BITCOIN: UMartin Vrijland
Ngaba i-2018 kunyaka wokuqaliswa kwemali ye-SDR yomhlaba ehlanganiswe nemali ye-crypto?
Kufakwe kuyo Bitcoin, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-12 Disemba 2017	• 11 Comments
Ngaphambili kule iveki ndapapasha kwi-Facebook kwiphepha eliphambili leMagazini i-Economist evela kwi-1988. Ibonisa i-phenix eyazikhuphayo kwimali yokutshisa iphepha. Emazantsi kwentamo ye-fenix yintsimbi yegolide ebonakalayo ekhumbuza kakhulu i-crypto currency bitcoin. Kule ngqekembe sibona [...]
Indlela i-bitcoin kunye nabanye baza kudibaniswa ngayo ne-IMF yamalungelo okuDrafka okhethekileyo (SDR) nge-ACChain
Kufakwe kuyo Bitcoin, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-9 Disemba 2017	• 16 Comments
Ngoxa wonke ngoku swi nga bitcoin ukwenza imali ngokukhawuleza ngokusebenzisa lwemali crypto, Crypto-bebabaza kubonakala okunene ukuba kakhulu ukujongela phantsi nkqubo wemali phantsi bacinge ukuba Crypto lwemali phantsi swii yeebhanki ezinkulu-IMF . Kuya kuba yimali eyasetyenziswa ngumntu ongaziwa [...]
Kutheni kungekho lizwe ehlabathini elikhononda ngayo ngamandla amakhulu eBotcoin
Kufakwe kuyo Bitcoin, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	30 Novemba 2017	• 17 Comments
I-Cryptocurrency njengokuba (ngokukodwa) i-bitcoin isebenzisa umbane omkhulu! Oku kuninzi kangangokuba kudlula ukusetyenziswa kwamandla kwamazwe onke. Imayini yeBitcoin isebenzisa amandla amakhulu kunamazwe afana ne-Ireland neNigeria. Nge-28 kaNovemba i-website ye-Naturalnews.com iza kunye nokusetyenziswa kwamandla we-bitcoin ngokuthelekiswa nawo onke amazwe ehlabathini (jonga apha). [...]
Yintoni i-Bitcoin enokuyenza ngayo 'ubuncwane' kunye nokudibanisa neAI?
Kufakwe kuyo Bitcoin, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	28 Novemba 2017	• 15 Comments
Xa uqala ukungena kwi-'bitcoins', ufika kuhlalutyo olulula njengoko ndinike lona kweli nqaku. Oko kunokunika uncedo oluyisiseko kwi-bitcoin okanye kwi-cryptocurrency, kodwa eqinisweni oko kwakuboniswa ngokulula kakhulu. I-Cryptocurrency ininzi kwaye inakho konke [...]
Ngaba i-Bitcoin kunye ne 'Big Data' igolide entsha okanye ioli entsha?
Kufakwe kuyo Bitcoin, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	27 Novemba 2017	• 8 Comments
Le bitcoin becala kusetyenziswa kwiminyaka yalo yokuqala ngabantu abafuna ukunika iziyobisi zabo ezifana engaziwa ngeposi ekhaya. Abo uqalise nayo iminyaka 7 10 kowethu bitcoints ulibele ukuba uphefumlela ngaphakathi, ngoku ibe bitcoinmiljonairs kuqala. Ukuba kwi-2010 uhlawula kuphela i-euro ye-10 [...]
Utyelelo lulonke: 2.504.407